Matipi ekutenga pamhepo anotevera Black Chishanu | ECommerce nhau
Vakakurumbira Black Friday rave pedyo, uye kune akawanda zvitoro zvepamhepo izvo zvisingade kupotsa mukana wekupfuurira kumberi uye kuve pakati peavo vakasarudzwa kuita iyo pkutanga Kisimusi kutenga. Izvi zvinowanzoitika kuAmerica, izvo zvichaitika gore rino muna Mbudzi 27, zvatove nekusvika pasirese, uye chiri chirevo chekuti vatengesi vanogona kutora mukana wakawanda.
Chishanu Chishanu izuva rakatarwa revatengesi nevatengi. Zvisinei, zvakawanda online stores, vachitora mukana wekukweva, ivo vanoshambadzira venhema kana kuvhiringidza kukwidziridzwa kuyedza kuhwina vatengi.
1 VaSpanish vanomirira Chishanu Chishanu nemufaro wakawanda kupfuura kutengesa
2 Matipi ekutora akanakisa madhiri online panguva yeChishanu Chishanu
2.1 1. - Gadzira chishuwo chinyorwa pamberi peChishanu Chishanu
2.2 2 - Chenjera nezvezvishoma zvenhema
2.3 3. - Ita chokwadi chekukomba kwechitoro
2.4 4. - Tarisa mitengo mune dzimwe nyika
3 Chenjerera maCyber ​​Muvhuro madhiri
VaSpanish vanomirira Chishanu Chishanu nemufaro wakawanda kupfuura kutengesa
Sezvo nemaAmerican vatengi maitiro, akadai seHalloween kana Zuva reValentine, Nhema Chishanu yakurumidza kuwana mukurumbira muSpain. Kadhi ravo rebhizinesi rakadzikiswa zvakanyanya rakabatsira kuveza niche mumusika weSpain. Kubva muna 2013 Amazon madhiri makuru achaziviswa neChishanu Chishanu, iro zuva rave renongedzo yekutenga pamhepo.
Matipi ekutora akanakisa madhiri online panguva yeChishanu Chishanu
Kubva Zvishongedze vanotiudza maitiro ekutenga pamhepo panguva yeChishanu Chishanu pasina kubviswa.
1. - Gadzira chishuwo chinyorwa pamberi peChishanu Chishanu
Mwedzi mumwe chete pamberi peKisimusi, Nhema Chishanu inomiririra chiitiko chikuru chekuita iyo holiday shopping uye uwane zvipo zvaunoda kutenga nemutengo wakaderera.
Kuti udzivise zvisina basa mari, Idealo anorayira kuisa mu Favorites runyorwa kubva kune yayo portal (www.idealo.es) zvese izvo zvigadzirwa zvinokufarira. Chinangwa hachisi chekupedzisa kutenga panguva iyoyo, asi kucherechedza shanduko yemutengo wezvigadzirwa uye kuona kana zuva racho rasvika iwe unogona kuona kudzikiswa kunonakidza zvechokwadi.
Uye zvakare, pamwe neAppoalo app, inowanikwa ye iOS y Android, unogona kuona zviri nyore kana mutengo wekutengesa washanduka kana kuti kwete zvichibva paruvara urwo rwainowanikwa. Mutengo unoratidzwa mutema kana wakadzika, mutsvuku kana wakakwira uye nemaranjisi kana usina kuchinja kubvira pawakachengeta muFavorites.
2 - Chenjera nezvezvishoma zvenhema
Usati wavhara yako yekutanga "yakanaka kutenga" zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti ichokwadi chibvumirano chakanaka. Kubva kuna Idealo vanotipa mamwe matipi ekuziva iwo chaiwo mabhagidhi.
Iyo dhisikaundi inotorwa kubva pamutengo wekutengesa wakakurudzirwa. Zvishambadziro zvakaderedzwa dzimwe nguva zvinoreva mutengo unogadzirwa wekutengesa, asi haifanire kunge uri iwo mutengo unoshandiswa nezvitoro kusvika ipapo. Iyo yekupedzisira inowanzo kupa zvigadzirwa nemitengo yakaderera. Kana huwandu hwekudzikiswa huchireva kumutengo wekutengesa unorumbidzwa, mutengo wacho hausi wekubatsira sezvawaiita pakutanga kuona.
Mitengo yakadzikira haina kusanganisira mari yekutumira. Chinyengeri chinodzokororwa chiri kuviga mari yakakwira yekutumira. Mune zvimwe zviitiko, vatengesi vanokukurudzira kuti uwedzere zvimwe zvigadzirwa kungoro yekutengera kuti usvike hushoma huwandu hunodiwa pakutakura mahara; nzira inoshanda yekuita zvekumanikidza zvaungazodemba.
Enzanisa nemitengo. Bhargiji dzinowanikwa mune zvimwe zvitoro zvepamhepo panguva yeChishanu Chishanu zvinogona kunge zvakachipa mune zvimwe zvitoro, kunyangwe kana zvisina kuiswa mucherechedzo. Mitengo inogona kusiyanisa zvakanyanya kubva kuchitoro chimwe kuenda kune imwe zvekuti zvinogara zvichikosha kuenzanisa mitengo, kunyangwe iwe uchitenga online kana muchitoro chaicho.
Kubva kuna Idealo ivo vanotiyeuchidza kuti kunyorera kwavo kunogona tarisa barcode zvechigadzirwa chawakaona muchitoro chemuviri uye enzanisa kana mitengo yakapihwa nezvitoro zvepamhepo zvinosanganisira mari yekutumira yakaderera.
3. - Ita chokwadi chekukomba kwechitoro
Kunyangwe iwe wawana chigadzirwa chawaitsvaga nemutengo wausingakwanise kupotsa, haufanire kutorwa nemanzwiro uye kungotenga. Unofanira chengetedza kuti chitoro chinotendwa kudzivirira kudonha kune akawanda matsotsi anowanikwa paInternet.
Kubva kuna Idealo kunotiyeuchidza kuti timu yake inoongorora kukomba kweumwe neumwe wezvitoro asati atanga kubatana. Uye zvakare, kuiswa nezvitoro zvepamhepo zvechiratidzo chemhando yepamusoro, senge iyo Yakavimbika Shopu kana Confianza Online zvisimbiso zvinoratidza kukomba kweiyo portal. Kana iro peji risina yambiro yepamutemo, mamiriro ekutengesa kana sarudzo dzekubata, tinokurudzira kubvunza chimwe chitoro chepamhepo.
Kuwedzera pakuongorora iyo Yambiro yemutemo, izvo zvinosungirwa kune yega online chitoro, iwe zvakare unofanirwa kutarisa iyo General mamiriro, izvo zvakare zvinosungirwa kune aya masaiti. Vatengi vanofanirwa kubvunza aya mazwi vasati varaira uye kutarisa akakosha mapoinzi sekubhadhara, kutumira uye kudzoka nzira.
4. - Tarisa mitengo mune dzimwe nyika
Chishanu Chishanu haisi kungopembererwa chete kuSpain, asi tsika yasvika muEurope yese. Neichi chikonzero, zvakafanira kurangarira mumusika wepasirese kana uchitsvaga chipo chakanaka, nekuti mutsauko wemitengo unogona kuve wakakura kwazvo kune zvimwe zvigadzirwa.
Nekudaro, usakanganwa kuti iyo yekupedzisira mutengo inogona kusiyana kana uchiwedzera iyo yekuwedzera mari, zvinoenderana nenyika iyo iko kuendesa kunoitwa. Usati waisa odha kubva kunze kwenyika, tarisa zvinotevera:
Kana chitoro chikatumira kuSpain
Yakawanda sei mari yekutumira?
Kana paine zvimwe zvekuwedzera mutengo kumutengo wakaratidzwa
Ndeapi mazwi ekubhadhara.
Chenjerera maCyber ​​Muvhuro madhiri
Mahara pamhepo madhiri haagume neChishanu Chishanu. Mumumvuri wayo iri kuwedzera kufarirwa Cyber ​​Mbudzi, ichaitwa Muvhuro unotevera. Kwemakore, Dema Chishanu uye Cyber ​​Muvhuro vakasimbisa kuvapo kwavo pamhepo, uye haachisiri mazuva maviri chaiwo mairi kutengesa online, asi zvitoro zvakawanda zvepamhepo zvinowedzera zvavanopa kubva Chishanu kusvika Muvhuro kana, mune zvimwe zviitiko, kunyangwe pavhiki, saka ichave nguva yekuchengeta maziso ako akavhurika uye uone zvinoitika nemitengo yepamhepo kubva munaNovember 27 kusvika 30.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Zvechokwadi uye nhau » Matipi ekutenga pamhepo anotevera Black Chishanu
Mamiriro ezvinhu akajairika anosungirwa muchitoro chepamhepo, saka sezvaunotaura, zvinogara zvichikurudzirwa kuti uzviongorore usati watenga sezvo mamiriro ekudzoka, nezvimwe zvichiratidzwa. Shuwiro yakanakisa
Armando Castellblanco akadaro
Aya matipi anobatsira chaizvo pakutenga online. Zvirokwazvo basa rekuzivikanwa kwechigadzirwa rakakosha kwazvo kuti uzive chiri kunyatsotengwa. Ini ndinokurudzira kuti makambani ese anoshuvira kutengesa kuburikidza neaya mageru aite iyo barcode. Mukambani mangu takazviita neGS1 Colombia uye takaita zvakanaka kwazvo.
Pindura kuna Armando Castellblanco